iOS - ငါက Mac ပါ ကျွန်ုပ်သည် Mac မှ (စာမျက်နှာ 2)
အက်ပဲလ်သည်ပထမဆုံး WatchOS 7.4 beta, tvOS 14.5 နှင့် iOS 14.5 ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်သည်
WatchOS 7.4, tvOS 14.5 နှင့် iOS 14.5 တို့၏ပထမဆုံး beta ဗားရှင်းများသည် developer များလက်ထဲတွင်ရှိသည်
သင်၏ WhatsApp စာတိုများနှင့်အုပ်စုများတစ်ခုလုံးကို Telegram သို့အလွယ်တကူမည်သို့မည်ပုံပို့နိုင်သည်
သင်၏ WhatsApp မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ချက်တင်များနှင့်အုပ်စုများအားလုံးကို Telegram သို့အလွယ်တကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်မည်သို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်မည်ကိုသင့်အားပြသပါမည်
"iOS စက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဆော့ဝဲလ်ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သည်။ "
သင့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod ကို Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းပြ,နာ၊ “ iOS device နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်” စာတို
QR Code ကို အသုံးပြု၍ Apple Pay ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်း
Apple သည် iOS ၏ beta ဗားရှင်းတွင် QR ကုဒ်များသို့မဟုတ်ဘားကုတ်များမှတဆင့်ငွေပေးချေမှုနှင့်စုဆောင်းမှုများကိုသက်ဝင်စေမည့်ရွေးစရာတစ်ခုထပ်ထည့်သည်
Maps, Siri နှင့် iOS Messages အက်ပ်များတွင်ဘာအသစ်တွေရှိသလဲ
WWDC 2020 ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရပြီ။ ဤအမှု၌ Messages, Maps နှင့် Siri အက်ပလီကေးရှင်းများတွင်တိုးတက်မှုများရှိသည်။
သင့် iPhone ၏ recovery mode ကိုစတင်ရန် Mac သည်မလိုအပ်ပါ
iOS ၏ beta version သည်အသုံးပြုသူများအား Mac လိုအပ်စရာမလိုဘဲ iOS Recovery Mode ကို activate လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပေးသည်
သင်၏ HomePod ကို iOS 13.2 သို့မွမ်းမံပါ
အချို့ HomePod များသည် iOS 13.2 update ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ကြိုးစားရသည့်အကြောင်းရင်းကိုမသိဘဲအသုံးမပြုနိုင်တော့ပါ
GarageBand ကို iOS 13 နှင့်မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသည်
GarageBand သို့မွမ်းမံမှုအသစ်ဖြင့်သင်သည်ဟစ်ဟော့ကွင်းအများအပြားနှင့်စည် ၆ ခုအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုများများရလိမ့်မည်။
AppStore မှတဆင့် App Store များမသွားခင် application များကိုထည့်သွင်းပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
သင်သည်သင်၏ iPhone ကို Jailbreak လုပ်ရန်မလျှောက်ဝံ့ပါ၊ သို့သော်သင်အသုံးချပရိုဂရမ်များပိုမိုလိုချင်ပါသလား။ AltStore မှတဆင့်ဘယ်လိုရယူရမယ်ဆိုတာသင့်ကိုပြပေးပါတယ်။
iOS 13 သည် application download ကန့်သတ်ချက်ကိုအရွယ်အစားအားဖယ်ရှားပေးသည်
iOS 13 ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တည်ထောင်ခဲ့သည့် application များနှင့်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ခြင်းသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
Apple က iOS 13 ကိုမှောင်မိုက်တဲ့ mode၊ slide-out keyboard နဲ့ပိုပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်
WWDC 13 မှာ Apple က iOS 2019 ကိုပြတင်းပေါက်အသစ်တွေနဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ mode၊ ကီးဘုတ်လျှော၊ သီချင်းစာသား၊ Memoji စတစ်ကာများကိုတင်ဆက်လိုက်သည်။
developer များအတွက် iOS4beta 12.3 version, watchOS 5.2.1 နှင့် tvOS 12.3 တို့ကိုလည်းဖြန့်ချိခဲ့သည်
သင်၏ဆက်သွယ်မှုမဟုတ်ပါ။ Siri သည်ဥရောပတစ်ဝှမ်းနေရာများစွာတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ
Siri သည်ဥရောပတစ်ဝှမ်းနေရာအနှံ့အပြားတွင်ပျက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ကြီးတစ်ဝိုက်ရှိလူများသည် ၀ န်ဆောင်မှုမရှိဘဲနှင့်အဖြေမပေးဘဲထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာမီတွင် Apple News သည်မဂ္ဂဇင်းများကိုရယူရန်နည်းလမ်းကိုထည့်သွင်းတော့မည်ဖြစ်သည်
iOS 12.2 beta နှင့်အတူ Apple သည် News News တွင်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုမဂ္ဂဇင်းများကိုရယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
Duet Display ကို hardware အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် macOS လိုက်ဖက်တဲ့တိုးတက်မှုများဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်
iOS နှင့် macOS များအတွက် Duet Display ကို hardware acceleration ပါ ၀ င်ရန် update လုပ်ထားပြီးယခု iPad သည်ပြင်ပ monitor တစ်ခုအနေဖြင့် iPad ကို detect ။ ရှာတွေ့သည်!
tvOS ကိုပြန်လုပ်တဲ့ Steam Link
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Apple သည်၎င်းတို့၏အဆိုအရလိုက်နာမှုမရှိခြင်းအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းမှ Steam Link application ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ဒါက iOS 12 Memoji ကို iPhone ပေါ်မှာဖန်တီးပုံပါပဲ
မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ iOS 12 တင်ဆက်မှုအပြီးမှာ Apple ရဲ့အသစ်အဆန်းတစ်ခုကတော့ ...
iOS 12 သည်သင်မျက်နှာပြင်ရှေ့တွင်သင်အသုံးပြုရသောအချိန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံရန်ကူညီလိမ့်မည်
iOS 12 သည်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ကုန်ဆုံးချိန်ကိုစီမံရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသုံးပြုမှုအစီရင်ခံစာများကိုဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ချက်များသတ်မှတ်နိုင်သည်
CarPlay သည် iOS 12 တွင် Google Maps နှင့် Waze ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်
iOS 11 သည် Drag and Drop function ကို WWDC သို့ယူဆောင်လာလိမ့်မည်
WWDC 2017 သည်အိုင်ပက်ပေါ်ရှိ iOS 11 အတွက် Drag and Drop option အသစ်အပါအ ၀ င်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်
iOS 11 ပေါက်ကြားမှုအတွက် file explorer app တစ်ခု
iOS application store မှဖယ်ထုတ်ရန်အချိန်သိပ်မလိုသော်လည်းအမှန်တရားမှာ ...
Apple သည်၎င်း၏ iAds ဌာနအား NBCUniversal သို့လွှဲအပ်သည်
NBCUniversal ကုမ္ပဏီ၏အရောင်းမန်နေဂျာ Linda Yaccarino မှပေးပို့သောအီးမေးလ်အရ၎င်းအရ ...
သင့်အနေဖြင့် Siri ကိုအကြံမပြုရန်သင်ပြုလုပ်သမျှအားလုံးကိုခြေရာခံရန်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါကယနေ့၎င်းအားမည်သို့အားမရပ်ဆိုင်းမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါသည်။
iOS 10: ဘက်ထရီ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စဉ်းစားရမည့်အခြားရှုထောင့်များ
စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ဘက်ထရီကိုထိခိုက်နိုင်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာပါဝါနှင့်ပရိုဆက်ဆာတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ IOS 10 ဟာကွန်ပျူတာအဟောင်းတွေကိုပြproblemsနာတချို့ပေးပုံရသည်။
သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ရှိ iOS 10 ဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ
Apple က iOS 10 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခဲ့တယ်။ သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှာအနည်းငယ်သာကပ်နေသလား။ ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်ကယင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။
IOS 10 ၏သတင်းများအားလုံးကိုအဓိကဖော်ပြချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
IOS 10 ၏အသစ်အဆန်းများအကြောင်းကို Apple ၏အဓိကကျသောအကြောင်းပြချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျများအတွင်းရှိ Animation များ၊ အသိပေးချက်အသစ်များ၊ ပိုမိုအက်ပ်များရှိ Siri
iOS9ကို Support လုပ်ထားတဲ့ ၇၆% မှာတွေ့ရပါတယ်
iOS 10 နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ရန်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကုမ္ပဏီသည် iOS9ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်။
ယခု developer များသည် App Store တွင်ပြန်လည်အသစ်ဖြည့်ထားသော subscription ကိုပေးနိုင်ပါသည်
နောက်ဆုံး WWDC တွင် Apple ကြေငြာခဲ့သော subscription system အသစ်သည် developer များအသုံးပြုရန်ရရှိပြီဖြစ်သည်။
iCloud Drive နှင့်ဂူဂဲလ်ဒရိုက်တို့ကဘာကောင်းလဲ။
အကောင်းဆုံးသိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းနှင့်အကောင်းဆုံး cloud ဆိုတာဘာလဲ။ ဤရွေ့ကား iCloud Drive နှင့် Google drive ၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။ နှစ်ခုဆန့်ကျင်စနစ်များ။
iOS 10: Widget နှင့် Control Centre ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်၊ သို့သော်တိုးတက်နိုင်သည်
iOS 10 beta ကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီ။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါက control စင်တာနဲ့ဝစ်ဂျက်နှစ်ခုလုံးအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကိုပိုလွတ်သွားပြီ။
iOS 10 နှင့် emojis အသစ် - နှုတ်ဆက်ပါတယ်၊ မင်္ဂလာပါ
Emojis အသစ်များသည် iOS 10 နှင့် MacOS သို့ ၀ င်ရောက်လာပြီး ပို၍ အရောင်အသွေးစုံသောဒီဇိုင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောပြုပြင်မွမ်းမံမှုများဖြင့်လာမည်။ နှုတ်ဆက်သည့်သေနတ်များနှင့်လက်နက်များ၊ လွတ်လပ်မှုနှင့်တန်းတူညီမျှမှုကိုမင်္ဂလာပါ။
iOS သည် ၂၀၁၆ တွင် Android ထက်အဘယ်ကြောင့်ပိုကောင်းသည်
လက်ရှိ Android သည်အတော်အတန်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။ သို့သော်ယနေ့အချိန်၌ပင် iOS သည် Android ထက်အခြားအဆင့်နှင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်စဉ်းစားနေသည်။
Mac OS သည် iPad Pro operating system ဘယ်တော့မှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ကမ္ဘာ့အင်အားအရှိဆုံးနှင့်အကျိုးအရှိဆုံး desktop operating system ဖြစ်သော Mac OS သည် iPads သို့မလာပါ။ ကျနော်တို့ Apple ရဲ့နည်းဗျူဟာကဘာလဲဆိုတာသင်ပြောပြပါ။
iOS 10 ရဲ့ကွာခြားချက်က iPhone နဲ့ iPad
iOS 10 ၏အဓိကကျသည့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး beta များကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လက်ရှိနှင့်အင်အားအကြီးဆုံးအိုင်ဖုန်းနှင့်အိုင်ပက်ဒ်များအကြားမည်သို့ကွာခြားသနည်း။
၎င်းသည် iOS 10 ရှိမြေပုံအက်ပ်အသစ်ဖြစ်သည်
ပြီးခဲ့သည့် WWDC အတွင်းအက်ပဲလ်သည်၎င်း၏နောက်ထပ် operating system အသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
iOS ပေါ်ရှိ message သတိပေးချက်များကိုထပ်လုပ်ခြင်းကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
သင့် iPhone ပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့တိုင်းသတိပေးချက်သတိပေးချက်သည်နှစ်ခါလာသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါသလား။ The …
တရားဝင် iTip QuickType လို့ခေါ်တဲ့ iPhone, iPad မှာ Apple ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
iOS 10: Apple က Xiaomi ကို plagarized?
iOS 10 beta ကို developer မလိုပဲ install လုပ်နည်း
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့ည မှစတင်၍ iOS 10 beta ကိုယခုအချိန်အထိရရှိနိုင်သည်။
iOS 10 Beta 1 ၏ပထမဆုံး beta သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က iOS တွင်အသုံးမ ၀ င်သော Game Centre ၏သဲလွန်စကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
ဟုတ်ကဲ့။ Apple operating system အသစ်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေရနေပုံရတယ်။
မည်သည့် iOS ထုတ်ကုန်များသည် iOS 10 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သနည်း။ [အသစ်ပြုပြင်သည်]
Mac နှင့် ပတ်သက်၍၊ အသစ်စက်စက်နှင့်မကြာသေးမီကဖြန့်ချီခဲ့သော operating system နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောစက်များစာရင်းရှိသည်။
iOS10 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ တိုးတက်မှုအားလုံး
နောက်ဆုံး WWDC ပြီးနောက် Apple သည်၎င်း၏ OS အားလုံး၏ update ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ iOS10 ကိုတိုးတက်မှုအမြောက်အများနဲ့အတူအသစ်စက်စက်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
WWDC 2016 ၏ Retro နောက်ခံပုံများ
Apple event တစ်ခုစီတိုင်းရောက်တဲ့အခါ၊ Apple logo လိုမျိုးအရောင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဖိတ်ကြားခြင်းများဟာသင်၏ Mac သို့မဟုတ် iPhone အတွက် Wallpapers တစ်ခုပြုလုပ်ရန်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုပါ။
အိုင်ပက်မှ multitasking ပြုလုပ်ခြင်းကိုညှစ်ရန်လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ (I)
Multitasking ကို iPad ပေါ်ရှိ iOS9နှင့်အတူမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်သုံးခုဖြင့် ...
'Paranormal Agency: The Ghosts of Wayne Mansion (Full)' ဂိမ်းသည် In-app ဝယ်ယူခြင်းများမရှိပဲအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖြစ်သည်။
Apple သည် iOS 9.3.2 နှင့် OS X 10.11.5 ၏ပထမဆုံး Public Beta ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
မနေ့ကမွန်းလွဲပိုင်းနှင့် developer များအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုဗားရှင်းပြီးနောက်ဤ၏အစအ ဦး မှာဖြန့်ချိခဲ့သည် ...
OS X 10.11.5 နှင့် iOS 9.3.2 Beta ယခုအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်
Public Beta ပရိုဂရမ်တွင်စာရင်းသွင်းထားသောသုံးစွဲသူများအတွက် Apple X သည် OS X 10.11.5 နှင့် iOS 9.3.2 Betas ကိုထုတ်ပေးသည်။
သင်၏မှတ်စုများကို iOS နှင့် OS X တွင်ကာကွယ်ရန်စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပါ
သင်၏မှတ်စုများကို OS X တွင်လုံခြုံအောင်လုပ်ခြင်းသည်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ မှတ်စုတစ်ခုရွေးရုံသာဖြစ်သည်။
San Bernardino ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင်အသုံးပြုခဲ့သော iPhone 5c ကို FBI ကသော့ဖွင့်မိနိုင်သည်
ဒီနေ့သည် Cupertino ယောက်ျားလေးများအားတရားရုံးသို့သွားရန်ရှင်းပြရန်ရွေးချယ်သောနေ့ဖြစ်သည် ...
iOS 9.3 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအတွက်လင့်ခ်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
လပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် Apple သည်မနေ့က iOS ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနောက်ဆုံးနေ့တွင်ထုတ်လွှတ်လိုက်သည်။
iOS 9.3 ၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာ iCloud ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် iBooks, PDF နှင့်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းမှ iCloud မှသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ဒါကနောက်လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာ Apple ကိုပြသမှာပါ
သတင်းတွေအများကြီးမျှော်လင့်ထားပေမယ့်အလွန်အကျွံတော့မလိုတဲ့ Apple ရဲ့တင်ဆက်မှုအသစ်ကနေရက်အနည်းငယ်သာဝေးကွာပါသည်။
Pangu သည် OS X မှ Download လုပ်ရန် iOS 9.0 - 9.1 အတွက် Untethered Jailbreak ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Pangu က Jailbreak ကို iOS 9.0 နဲ့ iOS 9.1 ကို run ပါတယ်
Wifi Mouse Pro သည် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက် App Store တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်
သင်၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch မှသင်၏ Mac ကိုထိန်းချုပ်ရန် Wifi Mouse Pro အပလီကေးရှင်းသည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
Apple က iOS5beta 9.3, watchOS 2.2, OS X 10.11.4 နှင့် tvOS 9.2 တို့ကိုလူတိုင်းအတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
အမှန်စင်စစ်အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏လည်ပတ်ရေးစနစ်အားလုံး၏ beta ဗားရှင်းသစ်အရောင်းအဝယ်အသစ်တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်၊
သင့် iPhone တွင် Reminders တစ်ခုကိုမည်သို့သတ်မှတ်မည်နည်း
တစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသူတို့ဆိုင်းငံ့ထားသောလုပ်ငန်းများကိုသတိပေးရန်တစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး လိုအပ်သူများစွာရှိသည်။ အဲဒီအတွက်…
ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့် iPad တွင်ပိုမိုလုံခြုံသောစကားဝှက်တစ်ခုဖန်တီးနည်း
"San Bernardino သေနတ်သမား" ၏အိုင်ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောကြီးမားသောအငြင်းပွားဖွယ်ရာများကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးယနေ့တွင်၎င်းသည်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
Apple ကအသစ်သော Apple TV အသစ်အတွက် Remote application အသစ်ကိုလွှတ်မည်
Apple TV4အတွက် Remote app ကိုယခုနှစ်အတွင်းဖြန့်ချိမည်ဟု Apple ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိများကအတည်ပြုခဲ့သည်
သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင်အိမ်မျက်နှာပြင်သစ်တစ်ခုဖန်တီးနည်း
ဒီနေ့ဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံး iOS ထုတ်ကုန်နှင့် ...
သတိပေးချက်လျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ချင်သော (သို့) ရှိလိုသမျှကိုမေ့ပစ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင့် iPhone ပေါ်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှတုံ့ပြန်မှုမရှိပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း
အကယ်စင်စစ်သင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်စွန့်ခွာသွားသည် ... တစ်ကြိမ်ထက်မကသင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်မှာသေချာသည်။
iOS 9.3, watchOS 2.2, OS X 10.11.4 နှင့် tvOS 9.2 ရှိသတင်းအားလုံး
ဘယ်လို beta ကိုဗားရှင်းတစ်ခုတရစပ်။ ယခုအပတ်သည် developer များအတွက်အလုပ်များစွာဖြင့် ...
သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ရှိ Dock မှအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုမည်သို့ဖယ်ထုတ်ရမည်နည်း
ဒီနေ့ဟာသင်ပထမ ဦး ဆုံး iPhone သို့မဟုတ်သင်၏ပထမဆုံးအိုင်ပက်ကိုဖွင့်လျှင်၊
iPhone 6s နဲ့ 6s plus မှာဘက်ထရီပြproblemနာရှိနေတယ်။ Apple ကကျွန်တော်တို့ကိုအဖြေပေးတယ်
iPhone 6s နှင့် 6s plus များရှိဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်းသည်သုံးစွဲသူများစွာ၏သံသယဖြစ်မှုကို Apple မှဝန်ခံသည်။
Apple သည် iOS 9.3 beta သတင်းကိုအပြည့်အဝတင်ခဲ့သည်
မနေ့ကနေ့လည်ခင်းတွင်အက်ပဲလ်သည် iOS 9.3 beta ကို developer များအတွက်ပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Time Capsule ရှိပြီးမတတ်နိုင်သော iPad နှင့် iPhone သုံးစွဲသူများစွာရှိပြီးဖြစ်သည်။
ကွဲပြားသောသို့မဟုတ်တိကျသော iPhone ဖုန်းမြည်သံများကိုအချို့သောအဆက်အသွယ်များသို့သတ်မှတ်ခြင်းသည်ပျော်စရာမျှသာမဟုတ်ပါ။ သင်သိကောင်းသိရှိနိုင်သည်။
ကြည့်ရအောင်။ Notification ပစ္စည်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့ဤသို့သတိမထားမိသောကြောင့်၊
အက်ပဲလ်သည် OS X 10.11.3 ၏ပထမဆုံး beta ကို developer များဖြန့်ချိခဲ့သည်
သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင်စာသားများကိုအလွယ်တကူတည်းဖြတ်နိုင်သည်
သင်အများစုသည်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံး iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုထုတ်ရန်နီးကပ်လာလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်မိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် iPhone 6s သို့မဟုတ် iPhone 6s Plus တစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်အလွန်ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုရှိသည်မှာသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါ။
သင့်တွင် iPhone 6s သို့မဟုတ် iPhone 6s Plus ရှိပါကယခုသင် 3D Touch ၏အားသာချက်ကို သုံး၍ သင့်စာကိုဖတ်ရန်အကြောင်းကြားစာမပို့ဘဲမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖတ်ရန်
iOS နှင့် OSX၊ USB-C ကြိုးများ၊ Apple ဂေဟစနစ်၊ Apple Watch dock၊ Siri Remote Case နှင့်အခြားအရာများပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
i-i OSX၊ USB-C ကေဘယ်လ်များ၊ Apple Watch အထိုင်များနှင့် Siri Remote အတွက်အဖုံးများဖြင့် Mac မှကျွန်ုပ်တစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
သင် Apple Pay ကိုသုံးနိုင်သောကုန်သည်များကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း
iPhone 3s နှင့် 6s Plus (I) အသစ်တွင် 6D Touch အသုံးပြုနည်း
ဒီနေ့သင်ဟာ iPhone 3s နှင့် iPhone 6s Plus ရဲ့ 6D Touch function ကိုဘယ်လိုပိုရနိုင်မလဲဆိုတာသင်ခန်းစာပို့စ်များစွာကိုစလိုက်ပြီ။
သင့်ရဲ့ iPhone မှာနှိုးစက်တစ်ခုလျင်မြန်စွာနဲ့အလွယ်တကူဖျက်ပစ်နည်း
အကယ်၍ သင် iPhone ကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိတော့သောကြောင့်သင့် iPhone ပေါ်ရှိနှိုးစက်တစ်ခုကိုသင်ဖျက်လိုပါက၎င်းလွယ်ကူသောလှည့်ကွက်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလွယ်ကူစွာလုပ်နိုင်သည်
သင့် iPhone တွင်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုင်ရာ resolution ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ
သင်၏ဗီဒီယိုများသည်နေရာများစွာယူပြီးသို့မဟုတ်သူတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကြည့်စေလိုပါကသင့် iPhone တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်
Viper က Apple Watch အတွက်၎င်း၏ application ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
Viper က Apple Watch အတွက်၎င်း၏ application ကို update လုပ်သည်
iOS9တွင် Spotlight Search ကသင့်အားအက်ပ်အားလုံး၏ရလဒ်များကိုပြသသည်၊ သို့သော်သင်စိတ်မဝင်စားသောအရာများကိုအလွယ်တကူပိတ်နိုင်သည်
မိုဘိုင်းဒေတာအသုံးပြုမှုကို Wi-Fi အချက်ပြမှုနှင့်အသုံးပြုခြင်းကို iOS9မှ Wi-Fi လက်ထောက်ကအသုံးပြုသူအားအသိပေးခြင်းမရှိသည့်အတွက်တရားစွဲဆိုလိုက်သည်။
မင်းရဲ့ iPhone keyboard မှာအက္ခရာ preview ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
အကယ်၍ သင်၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကီးဘုတ်ရှိအက္ခရာကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်ဒီအင်္ဂါရပ်ကိုမည်သို့လျင်မြန်စွာ disable လုပ်မည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပါမည်။
iOS9တွင် Siri ဖြင့်အယူအဆရေးရာသတိပေးချက်များပြုလုပ်နည်း
သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ကို iOS9တွင်အသုံးပြုပါက Siri မှတစ်ဆင့်ဖန်သားပြင်တွင်မြင်တွေ့ရမည့်အရာများကိုသတိပေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်
သင့် iPad တွင်ရုပ်ပုံပုံမည်သို့သုံးရမည်နည်း
iOS9မှာ multitasking လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကတော့ Picture in Picture ။ ဒီနေ့မှာတော့သင့် iPad ပေါ်မှာဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်
အရောင် Sudoku ကို Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေးသည်
iOS9Spotlight သည်သင်၏ iPhone ပြင်ပတွင်လည်းရှာဖွေပြီးအဆက်အသွယ်များ၊ သင့်အနီးရှိနေရာများနှင့်စသည်တို့ကိုအကြံပြုသည်။ အားလုံး၎င်း၏အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များသိ
စာသားရွေးရန် iPad ၏ virtual trackpad ကိုအသုံးပြုခြင်း
အိုင်ပက်ဒ်တွင် iOS9ပါ ၀ င်သည့် virtual trackpad အသစ်သည်အထူးသဖြင့်စာသားကိုလျင်မြန်စွာရွေးချယ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်
iOS9ရောက်ရှိလာချိန်တွင်သင့် iPhone မှအခြား iPhone သို့ချိတ်ဆက်ရန် Bluetooth device ကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ။
iOS နှင့် OS X ကိုပေါင်းစည်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
iOS9ဖြင့် iPhone ဟောင်းကိုဘယ်လိုမြန်အောင်လုပ်မလဲ
iOS9ကိုစနစ်တိုးတက်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်းအချို့သောဟောင်းသောစက်များနှေးလာနိုင်သည်။ ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာဒီနေ့ပြပေးပါမယ်
Apple ရဲ့စာစီစာရိုက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ San Francisco ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များ
Apple ရဲ့စာစီစာရိုက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ San Francisco ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များ။ အသေးစိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုဥပမာတစ်ခု ...
XcodeGhost ကူးစက်ခံထားရသော applications များစာရင်း
XcodeGhost malware ကူးစက်ခံသော application များ၏စာရင်းဖြစ်သည်
Apple က 'XcodeGhost' malware ကူးစက်ခံရသော application များကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်
iOS9ဘက်ထရီချွေတာနည်းကိုအသုံးပြုနည်း
iOS9၏ဘက်ထရီချွေတာမှုနည်းလမ်း (သို့) iOS XNUMX သုံးစွဲမှုနည်းသောနည်းလမ်းသစ်ကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူပါ။ သင်၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ၏နေ့စဉ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးချဲ့ပါ။
operating system သစ်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအကောင်းဆုံးသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်ရန် iOS9ကို iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ပေါ်တွင်ခြစ်ပြီးတပ်ဆင်ပါ။
Apple သည် iOS9နှင့် OS X El Capitan အတွက် developer app များကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်
iOS9နှင့် OS X El Capitan တို့အတွက်သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်အတူအက်ပလီကေးရှင်းများအား ထပ်မံ၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်တင်သွင်းသူများအားအက်ပဲလ်ကအားပေးခဲ့သည်
ယူကေရှိ Halifax နှင့် Lloyds ဘဏ်များအတွက် Apple Pay ကိုရနိုင်သည်
EA သည် App Store မှ Dead Space သို့မဟုတ် Real Racing ကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်ဂိမ်းများစွာကိုရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
EA သည် App Store မှ 'Dead Space' သို့မဟုတ် 'Real Racing' ကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်ဂိမ်းများစွာကိုရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
အသစ်သော emojis ကို iOS 9.1 တွင်တွေ့ရသည်
အသစ်သော emojis ကို iOS 9.1 တွင်တွေ့နိုင်သည်
developer များအနေဖြင့်လက်ကိုင် OSOS2Golden Master (GM) ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဖြစ်သည်။
Apple သည် Golden Master of WatchOS2ကိုရွှေရောင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
iOS9ကိုစက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်ရရှိနိုင်သည်
Apple က iOS9ကိုနောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်သင်၏ iPhone နှင့် iPad ၏လည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်၏သတင်းတစ်ခုစီကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ဆောင်ပေးသည်။
OS X El Capitan တွင်လေယာဉ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ
သင်၏ခရီးစဉ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို OS X El Capitan နှင့် iOS9တွင်စစ်ဆေးပါ
မည်သည့်ပုံမဆိုနှင့်အတူလှပသော Emoji mosaic ကိုဖန်တီးပါ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံဖြင့် Emoji တေးဂီတကိုဖန်တီးရန်ကိရိယာတစ်ခု
TaiG သည် version 1.0.0 မှ Mac သို့ iOS ထုတ်ကုန်များကို 8.1.3 မှ 8.4 သို့ "အခမဲ့" သို့ပေးသည်
Apple နှင့် IBM တို့က Apple Watch နှင့် iOS အတွက်စီးပွားရေးအက်ပလီကေးရှင်းအသစ် ၁၀ ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည်
Spotify သည် Apple Music စတင်ပြီးသည့်အခါစိတ်ကြိုက်ဖွင့်စရာစာရင်းများအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်သည်
အက်ပဲလ်ဂီတစိတ်ကြိုက်ဖွင့်စရာစာရင်းများနှင့် Spotify သည်စိတ်ကြိုက်ဖွင့်ရန်စာရင်းများကိုအာရုံစိုက်သည်
OS X El Capitan နှင့် iOS9၏အများပိုင် beta များကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
OS X El Capitan နှင့် IOS9တို့၏အများပိုင် beta များကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
iOS9နှင့် OS X 10.11 တို့ကိုဖြန့်ချိသောအခါ Apple ၏အဆင့်နှစ်ဆင့်အတည်ပြုထားသောစကားဝှက်ပျောက်ဆုံးသွားသောစကားဝှက်သည်ပျောက်သွားလိမ့်မည်
Fantastical2သည် iOS ကိုထည့်သွင်းသင့်သည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်
Fantastical2သည် iOS တွင်ပါ ၀ င်သင့်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးအဘယ်ကြောင့်ဈေးအကြီးဆုံးပြက္ခဒိန်အက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်ပြောပြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
iOS 8.4 ကိုမွမ်းမံရန်သို့မဟုတ်မွမ်းမံရန်လား။
ဒီနေ့ iOS 8.4 ကိုဘာတွေထပ်မံယူဆောင်လာသလဲ၊ မွမ်းမံရန်အသုံးဝင်လျှင်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမည်၊
အဓိကအားနည်းချက်မှာ OS X နှင့် iOS တို့တွင်ဆက်လက်ရှိနေသည်
OS X နှင့် iOS ကိုထိခိုက်နိုင်သည့်အားနည်းချက်တစ်ခုမှာကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိနေခဲ့သည်
San Francisco typeface အသစ်ကို developer များအနေဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
အက်ပဲလ်ဟာ developer တွေအတွက်ထုတ်ပေးပြီးပြီ
iOS9သည် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးမပြုဘဲသင်၏ကွန်ပြူတာဖြင့် Continuity ကိုမိုဘိုင်းကွန်ယက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုတည်းတွင်ရှိရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ Continuity iOS9တွင်မိုဘိုင်းကွန်ယက်များတွင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်
iOS9(သို့) Jailbreak၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။
iOS9(သို့) Jailbreak၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ စိတ်မပူပါနဲ့ Applelizados မှာသင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာတွင်သင့်အတွက်မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေနိုင်သည်
iOS9ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် Links များ
iPhone နှင့် iPad အတွက် beta များကို torrent link များမှအောက်ပါပို့စ်မှကူးယူနိုင်သည်
iOS9- ယနေ့အထိအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးသော - WWDC15 ဖြစ်သည်
အက်ပဲလ်ဟာ iOS9ကို WWDC 2015 မှာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု၊ Siri၊ Notes, Apple Music, Maps, News စတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေနဲ့တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
Apple Watch မှ Siri သည် Tesla Model S ကိုစတင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Tesla Model S ကိုသင်စတင်၊ ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး Apple Watch မှ Siri ဖြင့်နေပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်သည်
WWDC 2015 အက်ပလီကေးရှင်းကို Apple Watch အတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးကွန်ဖရင့်ရက်ကိုအတည်ပြုသည်
အက်ပဲလ်က၎င်း၏ WWDC 2015 အက်ပလီကေးရှင်းကို Apple Watch အတွက်အထောက်အပံ့ဖြည့်စွက်ခြင်းအပြင်အဖြစ်အပျက်ကိုဇွန်လ ၈ ရက်အဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်။
OS X 10.11 နှင့် iOS9သည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်
အောက်ပါအက်ပဲလ်စနစ်များဖြစ်သော iOS9နှင့် OS X 10.11 သည်သတင်းကောင်းမရှိဘဲလုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်
OS X 10.11 သည် Control Center နှင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်မှုများကို iOS9နှင့်လည်းချိတ်ဆက်လိမ့်မည်
OS X 10.11 နှင့် iOS9သည်တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းများသာမကသင်၏ Mac ရှိ Control Center ကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုအာရုံစိုက်မည်
Mac များနှင့်သက်ဆိုင်သော Malware အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း
MAC_JELLY, Nvidia ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များနှင့် Mac များကိုထိခိုက်သော malware အသစ်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်သည်
သင်၏ Mac သည် iCloud နှင့်မှန်ကန်စွာစည်းညှိခြင်းမရှိသလား
သင့်ကွန်ပျူတာသည် iCloud နှင့်မှန်ကန်စွာစည်းညှိခြင်းမရှိပါကဤရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းနည်းများသည်အချို့သောကဏ္aspectsများကိုရှင်းလင်းပြလိမ့်မည်
ဖြုတ်ချခံဖြစ်သူ Scott Forstall သည် Apple ကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နေသော်လည်း ၀ မ်းမြောက်သည်
iOS အကြီးအကဲဖြစ်သူ Scott Forstall ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီမှနှင်ထုတ်ခဲ့ပြီးသူသည် Apple ကိုမရူးဟုပြောခဲ့သည်။
Apple Watch ဖြင့်သင်၏ Keynote တင်ပြချက်များကိုထိန်းချုပ်ပါ
တင်ပြချက်ကိုပြသရန်သော့ခတ်မှတ်စုကို Apple Watch မှထိန်းချုပ်နိုင်သည်
Apple Watch မှသင်၏ Microsoft PowerPoint တင်ပြချက်များကိုထိန်းချုပ်ပါ
Apple က iOS ပေါ်တွင် PowerPoint app အတွက် update ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည်။ ၎င်းသည် Apple Watch ကို အသုံးပြု၍ တင်ပြချက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်
clipboard သို့ကူးယူထားသည့်အရာအားလုံးကို OS X မှ iOS သို့ CloudClip ဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ
CloudClip application သည်ကျွန်ုပ်တို့အား OS X နှင့် IOS အကြား clipboard ကိုတပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည်
Mac မှ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ
ဒီ tool ကို Mac ကနေ Jailbreak ကိုစတင်ခဲ့သည်
Chrome Remote Desktop ဖြင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad မှ Mac ကိုအဝေးကနေဘယ်လိုသွားရမလဲ
Google က Chrome Remote Desktop အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့ Mac ကို iOS စက်ကနေဘယ်နေရာမဆိုလုံခြုံစွာဝင်ရောက်နိုင်မှာပါ။
iOS မှ Chrome Remote Desktop ဖြင့် Mac ကိုထိန်းချုပ်ပါ
သင်၏ Mac နှင့်မည်သည့် PC ကိုမဆို Chrome Remote Desktop ဖြင့်ထိန်းချုပ်ပါ
Legacy Mac များအတွက် Continuity Activation Tool သည် Bluetooth 4.0 ကိုယခုထောက်ပံ့ပေးသည်
Continuity Activation Tool 2.0 ကို Bluetooth 4.0 skewers နှင့်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ
Apple မှ iMessage မှနံပါတ်များကိုပယ်ဖျက်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်သည်
Apple မှ iMessage ကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်သည်
OSX Yosemite တွင်သင်၏ iOS Device မျက်နှာပြင်ကိုဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း
သင့်ရဲ့ iOS စက်၏မျက်နှာပြင်ကို OS X ရှိဗီဒီယိုထဲတွင်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ဖမ်းယူပါ
လက်ငင်း Hotspot ဖြင့်သင်၏ iPhone ၏အင်တာနက်ကိုသင်၏ Mac တွင်သုံးပါ
Mac OS X 10.10 Yosemite ရှိ IOS နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ Airdrop
Airdrop သည်ဤ OS X 10.10 Yosemite ၏မူကွဲအသစ်နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
OS X Yosemite နှင့် IOS 8 ၏တရားဝင် wallpapers များကိုကူးယူပါ
Mac နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက်တရားဝင် OS X Yosemite နောက်ခံပုံများယခုပင်ရရှိနိုင်သည်
iStick, iOS ထုတ်ကုန်များအတွက်ထူးခြားဆန်းကြယ်သော pendrive
iStick သည် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော pendrive ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုသင်၏ Mac သို့မဟုတ်အခြား iOS ကိရိယာသို့လွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
Flipboard ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏မဂ္ဂဇင်းအသစ်ဖြစ်သော Apple အားလုံး၊ Mac၊ iPad နှင့် iPhone သတင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်
Apple အားလုံး၊ ဒါက Flipboard ပေါ်မှာငါတို့မဂ္ဂဇင်းအသစ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲ
IDoceo လျှောက်လွှာ။ ကျောင်းသားများအတွက် iPad တွင်ရှိသောကျောင်းသားအားလုံး၏ဒေတာအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသောဆရာအတွက်အီလက်ထရောနစ်မှတ်စုစာအုပ်။
KeyCard သည်သင်၏ iPhone ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ Mac ကိုသော့ပိတ်ပြီးသော့ဖွင့်သည်
KeyCard သည်သင်၏ Mac ကိုအလိုအလျောက်သော့ခတ်ရန်၊ ၎င်းကိုသင့် iPhone နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုပြီး၎င်းကိုသင်လမ်းလျှောက်သောအခါသင်၏ Mac ကိုပိတ်လိမ့်မည်။ သင်ချဉ်းကပ်သောအခါသော့ဖွင့်လိမ့်မည်
သင်၏ပရင်တာ AirPrint ကို HandyPrint နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေပါစေ
HandyPrint သည်သင်၏ပရင်တာ AirPrint ကိုသဟဇာတဖြစ်စေသည်။ တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာ၎င်းသည်သင်၏ဒေသကွန်ယက်တွင်မျှဝေရန်ဖြစ်သည်။
လှည့်ကွက်: Xcode မစဘဲ iOS simulator ကိုဖွင့်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် Xcode ကိုအသုံးပြုပါကနောက်ဆုံးမူကွဲများအရ Apple သည် Developer ဖိုင်တွဲကိုမသုံးတော့ကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။